Dhawaan waxii guriga kaaga lumo smarth phonekaagaa kaa caawin doona sababta – Murtimaal
Dhawaan waxii guriga kaaga lumo smarth phonekaagaa kaa caawin doona sababta
01/23/2017 Video News NEWS
Dhawaan waxii guriga kaaga lumo smarth phonekaagaa kaa caawin doona sababta . Waxaa dhacda in aynu ku dawakhno raadinta alaab guriga dhexdiisa uun aynu ku weynay,marar baabay dhacdaa in shayga aad ogeyd in uu gurigaagan kooban yaallay, haddana aad ka quusato oo aad mid cusub raadsato, waana ay dhacdaa in muddo kadib la helo shaygii oo laakiin markan aan lahayn qiimihii uu markaas la raadinayey qofka u lahaa.
Imika oo ay tiknoolajiyaddu heer aad u sarreeya gaadhay, nolosheenna badankeedaa gudogashay, ayaa waxyaabaha yaabka leh ee u dambeeyey waxaa ka mid ah in qofka ay ka caawinayso in uu u adeegsado raadinta waxyaabaha kaga lumaguriga.
Shirkadda Microsoft ee caanka ku ah soo saarista barnaamijyada Kombiyuutarku ku shaqeeyo, ayaa imika dejisay barnaamij cusub oo talefannada casriga ah ku shaqaynaya, kaas oo qofka ka caawinaya in uu guriga ka dhex raadiyo waxa uu ku dhex waayey. Barnaamijkan cusub oo adeegsanaya farsamada tiknoolajiyadeed ee casriga ah ee Augmented Reality, ayaa ay shirkaddu hadda dalbatay in loo diiwaangeliyo si ay u yeelato xaqa sharci ee hab-abuurkiisa.
Warbixintan uu murtimaal turjumay oo ay faafisay shabakadda cnet.com ee tebisa wararka Tiknoolajiyaddu waxa uu intaas ku daray in barnaamijkan cusub ee ay shirkadda Microsoft soo saartay in uu awood u leeyahay dabagalka iyo helidda shayga lumay, taas oo ku imanaysa in barnaamijkan marka la shaqo geliyo uu shaashadda talefanka ku soo ururinayo shay kasta oo ka agdhow, (qolka gudihiisa yaalla) xitaa haddii uu qarsoon yahay, kadibna uu qofku alaabtaas shaashaddiisa ka muuqato ka dhex raadinayo, taas oo marka uu taabto u ishaaraysa jihada uu ka xigo iyo inta uu u jiro.
Barnaamijkan oo ay shirkadda Microsoft u bixisay HoloLens ayaa sidoo kale lagu rakibi karaa muraayadaha indhaha lagu qaato oo sida kombiyuutarka barnaamij ku shaqaynaya, iyo guud ahaan qalabka casriga ah.
Previous Post:cajiib Daawo sidi loogu soo dhaweyey fanaanada farxiya kabyar iyo sidi loogu so dhaweyey hargeya iyo Yurub Geenyo oo ka hor timi
Next Post:Daawo malqaacad yaableh oo lagu arkay meere ka mida meerayaasha